अर्को साता देखि कारोबारमा आउने सिंगटी हाइड्रोको शेयर, कति ओपनिङ्ग रेञ्ज? - जन आवाज
अर्को साता देखि कारोबारमा आउने सिंगटी हाइड्रोको शेयर, कति ओपनिङ्ग रेञ्ज?
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको शेयर सूचीकण प्रकृया अघि बढेको छ। कम्पनी शेयर सूचीकरणको लागि कागजातहरु सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गमा पुगेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु प्राप्त भएको मेरोलगानीलाई जानकारी गराए।
सिडिएससीले कम्पनीबाट प्राप्त कागजातहरू अध्ययन गरेर यहि साता भित्रै कम्पनीकाे शेयर, शेयरधनीको डिम्याट खातामा पठाउने तयारी थालेको छ। कम्पनीको शेयर डिम्याट खातामा आएपछि नेप्से र कम्पनीबीच सूचीकरण सम्बन्धी सम्झौता हुनेछ। त्यस अनुसार कम्पनीको शेयर अर्को साता नेप्सेमा सूचीकृत भएर त्यहि साता देखि नै कारोबारमा आउने देखिन्छ।
कति ओपनिङ्ग रेञ्ज?
नेप्सेले कुनैपनि कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने प्रावधान छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रूपैयाँ छ। त्यस अनुसार नेप्सेले कम्पनीकाे पहिलो कारोबारका लागि प्रतिशेयर न्यूनतम १०० रूपैयाँदेखि अधिकतम ३०० रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ।